မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ ယာဉ်မောင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န််််ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ ယာဉ်မောင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န််််ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များ
Boat Helper (ICRC)
The ICRC is looking foraBoat Helper for its Logistics Department to be based in its Sittwe SubDelegation. In close cooperation with the supervisor and the Logistics team, the Boat Helper will mainly be responsible to support the boat captain for the transportation of persons and goods as well as the maintenance of the boat.
The ICRC is looking foraBoat Helper for its Logistics Department to be based in its Sittwe Sub ...
Duty Station : Hakha, Chin State
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ ယာဉ်မောင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န််််ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။